Talyaaniga oo lagu qabtay Iimaam Soomaali lala xiriirinayo Alshabaab iyo Daacish. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Talyaaniga oo lagu qabtay Iimaam Soomaali lala xiriirinayo Alshabaab iyo Daacish.
On Mar 10, 2016 Last updated Mar 10, 2016
Boliska Talyaaniga waxay sheegeen inay Ninkaasi shalay ku soo qabteen meel ku dhow magaalladda Campobasso ee Gobalka Molise ee Koonfurta Talyaaniga.
Iimaamka oo aan magaciisa la shaacin, balse 22-jir ah ayaa la sheegay in lagu eedeynayo inuu dadka Magan-gelyo-doonka ku faafinayey Falal Xag-jirnimo, waa sida ay Boliska sheegeen.
Wakaalladda Wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa baahisay in Shir Jaraa’id in Iimaamkaasi lagu qabtay Xarun Qaxooti oo ku taalla Degaanka Campo Marino ee duleedka magaalladda Campobasso.
Ninkaasi oo horey qaxooti ahaan isaga dhiibay Talyaaniga ayaa la sheegay inuu ku baraarujinayey Qaxootiga kale inay noqdaan Is-qarxiyayaal iyo inay aadaan Rome iyo inay weerarka ka bilaabaan Saldhigga laga raaco Tareenadda.
Baarayaasha Dembiyadda ayaa laga soo xigtay inuu Eedeysanaha doonayeen inuu shalay (Arbaco) ka baxsado Xerada Qaxootiga, si uu u gaaro magaalladda Rome, balse ay Boliska qabteen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga, Anjaliino Alfaano ayaa u sheegay Barlamaanka Talyaaniga in qabashadda Iimaamka Soomalaiga muujinaysso sida ay u shaqeynayaan Nidaamka ka-hortagga ee Talyaaniga.
“Ma awoodno inaan yeelano Khatar Eber ah, laakiin qabashadda ka dhacday magaalladda Kambobaaso muujinaysaa shaqada Nidaamka Ka-hortagga. Yaanan Isku mashquulin, waa inaan ka mahadcelinayaa shaqada ay qabteen Boliskeenna ” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Talyaaniga.
Xigasho: ANSA & dpa
Xukuumadda Federalka oo sheegtay in Weerarkii Aw Dheegle lagu dilay, laguna qabtay tiro Saraakiil Alshabaab.